मृत मानिसबारे नयाँ कुरा पत्ता लगाए वैज्ञानिकले, आफू मरेको कसरी थाहा हुन्छ ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मृत मानिसबारे नयाँ कुरा पत्ता लगाए वैज्ञानिकले, आफू मरेको कसरी थाहा हुन्छ ?
एजेन्सी । अनुसन्धानकर्ताले मृत मानिसबारे गरेको अनुसन्धानले नयाँ कुरा पत्ता लगाएको छ । वैज्ञानिकहरुले मानिसले आफ्नो मृत्युपछि पनि घटनाहरुका बारे थाहा पाउने दाबी केही गरेका छन्। वैज्ञानिकका अनुसार मानिसको मृत्यु भएको केही समयसम्म मस्तिष्क जीवित हुन्छ, त्यसैले मानिसले आफ्नो मृत्यु भएको क्षण र त्यस क्षणका गतिविधिबारे थाहा पाउँछ।
अनुसन्धानकर्ताले युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा हृदयाघातपछि मृत्यु भएका मानिसहरुको अध्ययन गर्दा यो तथ्य पत्ता लगाएका हुन्। अनुसन्धानको क्रममा जसजसलाई पुनर्जीवित गर्न सकिएको थियो उनीहरुले आफ्नो मुटुको धड्कन बन्द भएपछि डाक्टर र नर्सको कुराकानी सुनेको बताए।
मुटुको धड्कन बन्द भइसकेपछि पनि उनीहरुले डाक्टर नर्सहरुको सम्पूर्ण संवाद, दृष्यको पनि देखेको भन्दै सुनाएका थिए । मुटुको धड्कन बन्द भइसकेपछि रगत मष्तिस्कमा प्रसार हुन छोड्छ, अनि मष्तिस्कको मृत्यु हुन्छ। तर यो प्रक्रिया पूरा हुन कहिलेकाहिँ घण्टौँ लाग्छ। चिकित्सकले मृत भएको घोषणा गरेपछि पनि मृतकले के भइरहेको छ थाहा पाउन सक्छ।
न्यूयोर्कको स्टोनी ब्रोक युनिभर्सिटी अफ मेडिसिनका अनुसन्धानको टोलीले हृदयाघात भएका बिरामीको सेवा अझ प्रभावकारी बनाउन र हृदयाघातपछि हुने मष्तिस्कको चोटलाई कम गर्ने उपचार पद्धति विकास गर्ने आशा राखेका छन्।
मृत्युपछि हाम्रो आत्मा के हुन्छ भन्ने ठूलो रहस्य अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन तर अनुसन्धानले मृत्युपछि केही जीवन हुन्छ भन्ने पत्ता लागेको छ।